Amacici Asebenza AmaDaisy ayizimbali eziyinhlanganisela ezinezimbali ezimbili ezihlanganiswe zaba munye, isigaba sangaphakathi nesigaba sangaphandle senkonyane. Ifanekisela ukuhlangana kwezindlela ezimbili ezimelela uthando lweqiniso noma isibopho esikhulu kunazo zonke. Idizayini ihlangana ngokuhlukileko kwimbali e-daisy evumela owembethe ukugqoka i-Blue Daisy ngezindlela eziningi. Ukukhethwa kwamasafire aluhlaza okwesibhakabhaka ukugcizelela ugqozi lwethemba, isifiso nothando. Amasafire aphuzi abakhethelwe i-petal petal ephakathi nendawo afaka ogqokayo ukuzwa umuzwa wenjabulo nokuziqhenya ngokunika lowo ogqokile ukuthula okuphelele nokuzethemba ekuboniseni ubuhle bayo.
I-Pendant I-Eternal Union eyenziwe ngu-Olga Yatskaer, isazi-mlando esiqeqeshiwe esinqume ukuphishekela umsebenzi omusha womklami wobucwebecwebe, sibukeka silula kepha sinencazelo. Abanye bangakuthola kuthinta ubucwebe beCeltic noma ifindo likaHerakles. Ucezu lumelela ukwakheka okukodwa okungenamkhawulo, okubukeka njengamajamo amabili axhumene. Lo mphumela udalwe ngemigqa efana negridi ehalwe ngaphezulu kwesiqeshana. Ngamanye amagama - laba bobabili baboshwe ndawonye njengoyedwa, kanti munye ubumbano lwababili.
Ukuqoqwa Ubucwebe Kuhlanganiswa nobuchwepheshe bemfashini nobuthuthukile, iphrojekthi ihlose ukudala izingcezu zobucwebecwebe ezingenza izinto zakudala zeGothic zenze isitayela esisha, zixoxa ngamandla endabuko esimweni sanamuhla. Ngentshisekelo yendlela i-Gothic vibes ethonya ngayo izilaleli, iphrojekthi izama ukuvusa umuzwa ngamunye ohlukile ngokusebenzisana okudlalayo, ukuhlola ubudlelwano phakathi kokuqamba nabagqokayo. Amatshe ayigugu okwenziwa ngezinto zokwenziwa, njengento ephansi ye-eco-imprint, asikwa ezindaweni ezifihliwe ngokungajwayelekile ukuphonsa imibala yazo esikhunjeni ukuthuthukisa ukuhlangana.
Ikholomu Isikhali sika-Eva senziwe nge-750 carat rose negolide elimhlophe. Inamadayimane ayi-110 (20.2ct) futhi iqukethe izingxenye ezingama-62. Zonke zinokuvela okubili okuhluke ngokuphelele: Ehlangothini lokubuka izingxenye zakhiwe ngama-apula, ekubukeni okuphezulu imigqa enomumo ongu-V iyabonakala. Ingxenye ngayinye ihlukaniswe eceleni komgwaqo ukudala umphumela wokulayisha wasentwasahlobo obambe amadayimane - amadayimane aphethwe ngokungezwani kuphela. Lokhu kugcizelela ngokunamandla ukukhanyisela, ubuhlakani futhi kwandise imisebe ebonakalayo yedayimane. Ivumela ukwakheka okukhanyayo kakhulu futhi okucacile, ngaphandle kosayizi womgexo.
Ijazi Lomsele Ukugoqwa Kwamehlo Amacici Asebenza I-Pendant Ukuqoqwa Ubucwebe Ikholomu